Dexedrine vs. Adderall: मतभेद, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार औषधि जानकारी भारी खेल औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, औषधि जानकारी कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा चेकआउट मनोरञ्जन प्रेस समुदाय, कल्याण समुदाय कम्पनी, समाचार समुदाय, कम्पनी कम्पनी औषधि जानकारी, समाचार
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> Dexedrine vs. Adderall: मतभेद, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
Dexedrine vs. Adderall: मतभेद, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
डेक्सेड्रिन र एडडेरल दुई पर्चेको औषधि हुन् जुन केन्द्रीय स्नायु प्रणाली (CNS) उत्तेजकको रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ। Dexedrine र Adderall ब्रान्ड नाम औषधि हो, तर तिनीहरू जेनेरिकहरू उपलब्ध छन्। यी दुई सीएनएस उत्तेजकहरू ध्यान घाटा hyperactivity अस्थिरता (ADHD) को साथै narcolepsy को रूपमा चिनिने एक अवस्था को उपचार मा प्रयोग गरीन्छ। यी औषधीहरूले मस्तिष्कमा न्यूरो ट्रान्समिटरहरूलाई असर गर्दछ जसले एक बिरामीको महसुस गर्ने ध्यान र सतर्कतालाई असर गर्छ।
Dexedrine र Adderall बीच मुख्य भिन्नता के हो?
डेक्सेड्रिन एक ब्रान्ड औषधि हो जसको जेनेरिक डिक्स्ट्रोमफेटामिन सल्फेट हो। यो एक सीएनएस उत्तेजक हो, र अधिक विशेष रूपमा, यो एक प्रकारको एम्फीटामिन हो। एम्फेटामाइन्स नोरपाइनफ्रिनको रिलीजको लागि उत्तेजित गर्दछ, र यो गतिविधिको प्राथमिक साइट मस्तिष्कको सेरेब्रल कॉर्टेक्समा छ। एम्फाटामाइन्सले सीएनएसको उत्तेजनाले थकान, बृद्धि गरिएको मोटर गतिविधि र सतर्कता, र समग्र राम्रो मुडको भावना कम गर्दछ। Dexedrine (Dexedrine Details) एडीएडीडी र नार्कोलेप्सीको उपचारमा एफडीए अनुमोदित छ। यो अन्य हस्तक्षेप प्रति मोटाई प्रतिरोधी केहि प्रकारको उपचारमा अफ-लेबल, वा एफडीएबाट अनुमोदन बिना पनि प्रयोग गरिन्छ। डेक्सेड्रिन तत्काल रिलीज ट्याब्लेटहरू, स्प्यानसुलहरू, र विस्तारित-रिलीज क्याप्सूलहरूमा पनि उपलब्ध छन्।
Adderall एम्फेटामाइन साल्टको संयोजन हो, xt देखि १ अनुपात dextroamphetamine (d-amphetamine) र levoamphetamine (l-amphetamine) समावेश गर्दछ। यसले Dexedrine को सक्रिय घटक, अन्य एम्फेटमाइन्सको साथ समावेश गर्दछ। यो एडीएचडी र नार्कोलेप्सीको उपचारमा प्रयोग गरिएको पर्चेको औषधि हो र डेक्सेड्रिन जस्तै काम गर्दछ। डेडेड्रिनको तुलनामा एडेरालल धेरै फराकिलो दायरामा उपलब्ध छ। Adderall (Adderall विवरण) तुरून्त रिलिज ट्याब्लेटमा आउँदछ। Adderall XR एक विस्तारित-रिलीज क्याप्सूल फॉर्मूलेसन हो।
औषधि प्रवर्तन एजेन्सी (DEA) Dexedrine र Adderall तालिका दोस्रो मादक पदार्थ ड्रग्स मान्दछ। तिनीहरू बानी बनाउने र दुरुपयोगको उच्च सम्भावना रहेको तथ्यका कारणले गर्दा यी औषधिहरू प्राप्त गर्नका लागि प्रतिबन्ध र दिशानिर्देशहरू छन्, जुन राज्य अनुसार फरक हुन्छ।
Dexedrine र Adderall बीच मुख्य भिन्नता
जेनेरिक नाम के हो? डेक्सट्रोम्पेटामाइन सल्फेट Amphetamine लवण (डी- amphetamine र l-amphetamine)
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? ट्याब्लेटहरू, स्पानसुलहरू, र विस्तारित-रिलीज क्याप्सूलहरू ट्याब्लेटहरू र विस्तारित-रिलीज क्याप्सूलहरू
मानक खुराक के हो? Mg० मिलीग्राम एक वा दुई पटक दैनिक पटक पटक mg० मिलीग्राम / दिन सम्म Mg मिलीग्राम एक वा दुई पटक दैनिक पटक पटक mg० मिलीग्राम / दिन
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ?3वर्ष र माथिका बच्चाहरू र किशोर-किशोरीहरू; वयस्कहरू3वर्ष र माथिका बच्चाहरू र किशोर-किशोरीहरू; वयस्कहरू
खोकी र छाती भीड को लागी सबै भन्दा राम्रो otc औषधि
डेक्सेड्रिन र Adderall द्वारा उपचार सर्तहरू
Dexedrine र Adderall ADHD को उपचार मा संकेत गरीन्छ। ADHD मध्यम देखि गम्भिर ध्यान विकर्षण, छोटो ध्यान स्पान, hyperactivity, र आवेग द्वारा विशेषता हो। यदि उपचार नगरिएमा, ADHD ले शैक्षिक र व्यावसायिक प्रदर्शन, साथै आधारभूत दैनिक कार्यहरू लाई असर गर्न सक्छ।
डेक्सेड्रिन र एड्डेलर प्रत्येक नै नर्कोलेप्सीको उपचारमा संकेत गरीन्छ। Narcolepsy अत्यधिक र अनियन्त्रित दिनको निद्रा हो। ADHD जस्तै, उपचार नगरिएका नारकोलेप्सीले दिनहुँको गतिविधिहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
डेक्सेड्रिन मोटाईको छोटो अवधि (केही हप्ता अवधि) को उपचारमा अफ-लेबल प्रयोग गरिन्छ जुन अन्य हस्तक्षेपहरू जस्तै आहार, व्यायाम, समूह प्रोग्रामहरू, वा अन्य लागूपदार्थको लागि उत्तरदायी छैन।
तपाईको चिकित्सकले तपाईको अवस्थाको लागि कुन उपचार उत्तम हो निर्धारित गर्न सक्छ।
सर्त Dexedrine Adderall
अवरोध मोटापा अफ-लेबल हैन
Dexedrine वा Adderall अधिक प्रभावी छ?
एक विश्लेषण १ studies अध्ययनले एडीएचडीको उपचारमा एम्फीटामाइन-प्रकारको उपचार प्लेसबोसँग दाँज्दछ। सामान्यतया, विश्लेषणले देखायो कि एम्फेटामाइन उपचारहरूले एडीएचडी लक्षणहरूको गम्भीरतालाई कम गर्‍यो तर उनीहरू उच्च संख्यामा बिरामीहरूसँग पनि जोडिएका थिए जो साइड इफेक्टको कारण अध्ययनबाट पछि हटे। डेक्सेड्रिन र एड्डेलर सिधा तुलना गर्दा, अध्ययनले देखायो कि एड्डेलरले समग्र एडीएचडीको लक्षणहरू घटाउने क्षमता देखायो तर डेक्सेड्रिनले एडीएचडी लक्षणहरू घटाए भन्ने कुनै प्रमाण छैन। यस जानकारीको आधारमा, Adderall लाई Dexedrine भन्दा बढि मनपर्न सक्छ।
तपाईका चिकित्सकले मात्र निर्णय गर्न सक्छन् कुन उपचार तपाईको लागि उत्तम हो।
कभरेज र डेक्सिड्रिन बनाम Adderall को लागत तुलना
डेक्सेड्रिन एक औषधी हो जुन सामान्यतया व्यावसायिक बीमाले ढाक्छ। चिकित्सा योजनाहरु द्वारा कभरेज फरक हुन सक्छ वा विशेष अपवादहरु बनाउन आवश्यक पर्दछ। Dexedrine को लागी आउट-अफ-पकेट मूल्य $ 800 भन्दा बढि खर्च गर्न सक्दछ। एकलकेयरबाटको कुपनले सामान्य मूल्य लगभग $ १ to कममा ल्याउन सक्छ।
जब रक्त शर्करा को स्तर परीक्षण सामान्य के हो
एडेलरल एक पर्चेको औषधि हो जुन सामान्यतया व्यावासायिक बीमाले ढाक्छ। चिकित्सा योजनाहरु द्वारा कभरेज फरक हुन सक्छ वा विशेष अपवादहरु बनाउन आवश्यक पर्दछ। Adderall को लागी आउट-अफ-पकेट मूल्य $ 300 भन्दा बढि हुन सक्छ। एकलकेयरबाटको कुपनले जेनेरिकको मूल्य लगभग $ २0० लाई tablets०, २० मिलिग्राम ट्याब्लेटहरूमा चयन फार्मेसीहरूमा ल्याउन सक्छ।
मानक खुराक ,०, १ mg मिलीग्राम ER क्याप्सूल ,०, mg० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू
एकलकेयर लागत $ १।-$ १55 $ 29--50
Dexedrine vs Adderall को सामान्य साइड इफेक्टहरू
Dexedrine र Adderall सम्भावित प्रतिकूल प्रभाव को समान सूची छ। सामग्रीमा समानताहरूको कारणले यो अपेक्षित छ। डेक्सेड्रिन र एडडेरल गम्भीर साइड इफेक्टसँग जोडिएको छ जस्तै एलिभेटेड रक्तचाप, टाचिकार्डिया, र पैल्पिटेशन। केहि उदाहरणहरुमा, मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन (हार्ट अट्याक) र अचानक मृत्यु भएको छ। सावधानी जब पूर्व-अवस्थित हृदय विकृतिहरू बिरामीहरूमा उत्तेजकहरू लेख्दा प्रयोग गरिनु पर्दछ।
डेक्सेड्रिन र एड्डेलरल निद्रा विकार हुन सक्छ अनिद्राको रूपमा चिनिन्छ, वा झर्नु र निदाउन असमर्थता। यसले दैनिक कार्यलाई असर गर्न सक्छ र अनुगमन गरिनु पर्छ। यी औषधिहरू सुक्खा मुख र चक्करको लागि पनि परिचित छन्। तपाईंले यी प्रतिकूल घटनाहरू तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग छलफल गर्नुपर्दछ यदि ती घट्छन् र दिक्क लाग्छ भने।
निम्नलिखित सम्भावित साइड इफेक्टहरूको एक समावेशी सूची हुनलाई लक्षित गरीएको छैन। पूर्ण सूची तपाईको स्वास्थ्यसेवा पेशेवरबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ।
भोक कम गर्नु हो परिभाषित छैन हो परिभाषित छैन
स्रोत: Dexedrine ( डेलीमेड ) Adderall ( डेलीमेड )।
Dexedrine बनाम Adderall को ड्रग अन्तरक्रिया
डेक्सेड्रिन र एड्डेलरल, जब सेरोटोनर्जिक औषधिहरूको साथसाथै प्रयोग गरिन्छ, सेरोटोनिन सिन्ड्रोमको घटना बढाउन सक्छ। यो सिन्ड्रोमले बिरामीलाई उत्तेजित, चक्कर आउँछ र मुटुको दर बढेको महसुस गर्न सक्छ। सामान्य एंटीडप्रेससन्टहरू जस्तै सेलेक्टिभ सेरोटोनिन पुनःअपटेक इनहिबिटरहरू र सेलेक्टिभ नोरपाइनफ्रिन रिअपटेक इनहिबिटरहरू, साथ साथै पीडा औषधि ट्रामाडोल, यसले डेक्सेड्रिन वा एडडेरालसँगको अन्तर्क्रियाको कारण हुन सक्छ।
Dexedrine र Adderall मोनोमाइन अक्सिडेज इनहिबिटरहरू (MAOIs) लिने बिरामीहरूमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। एमएओ अवरोधकर्ताहरूले ढिलो एम्फैटामाइन मेटाबोलिज्म, नोरपाइनफ्रिन र अन्य मोनोमाइन्सको स्नायु समाप्तबाट एम्फाटामाइनको प्रभाव बढाउँदै टाउको दुखाइ र उच्च रक्तचाप संकट को अन्य लक्षण पैदा गर्दछ।
निम्न सूची ड्रग अन्तरक्रियाको पूर्ण सूची हुन अभिप्रेत छैन। सम्पूर्ण सूचीको लागि तपाईको डाक्टर वा फार्मासिष्टको सल्लाह लिन उत्तम हुन्छ।
एप्पल साइडर सिरका संग तपाइँको धमनीहरु लाई सफा गर्न कती समय लाग्छ
औषधि औषधि वर्ग Dexedrine Adderall
सोडियम ल्याक्टेट एन्ट्यासिड हो हो
टोपिरामेट Antiepileptic हो हो
ट्रामाडोल ओपिओइड पीडा राहत हो हो
Dexedrine र Adderall को चेतावनी
डेक्सेड्रिन र एड्डेलर प्रत्येक स्ट्रोक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, र बच्चाहरू र वयस्कहरूमा अचानक मृत्युसँग सम्बन्धित छ। यी पूर्व-अवस्थित हृदय शर्तहरू भएका बिरामीहरूमा हुने बढी सम्भावना हुन सक्छ। राष्ट्रपतिहरूले यी सर्तहरूको लागि स्क्रिन गर्नुपर्दछ र ती बिरामीहरूलाई ह्रदयको विकृति हुन सक्नेहरूका लागि यी औषधिहरू लेख्नुहुँदा अत्यधिक सावधानी अपनाउनु पर्छ।
Dexedrine र Adderall, साथै अन्य CNS उत्तेजकहरू, रक्तचाप र मुटुको दर मा मध्यम वृद्धि संग सम्बन्धित छ। यी प्यारामिटरहरू मोनिटर गरिनु पर्छ जब बिरामीहरूले उत्तेजक लिन्छन्।
एडीएचडी औषधि का केहि प्रकारहरु, जस्तै Dexedrine र Adderall, पूर्व अवस्थित मानसिक विकार संग बिरामीहरु मा व्यवहार गडबडी बढाउन सक्छ। यदि यी सीएनएस उत्तेजकहरू आवश्यक छन् भने यी बिरामीहरूलाई राम्ररी अनुगमन गरिनु पर्छ। द्विध्रुवी बिरामीहरूले सीएनएस उत्तेजकहरूमा हुँदा मिश्रित वा मैनिक एपिसोडहरू अनुभव गर्न सक्दछन्।
बच्चाहरू र किशोर-किशोरीहरूमा उत्तेजकको दीर्घकालीन प्रयोग वृद्धि दमनसँग जोडिएको छ। उत्तेजकहरू हुँदा अस्थायी रूपमा उपचार रोक्न प्रोत्साहित गर्ने बिरामीहरूलाई बिस्तारै धीमा बृद्धि गर्ने बिरामीहरूलाई। प्राय जसो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले बच्चाहरू स्कूलमा नहुँदा उपचारबाट विश्राम लिने सल्लाह दिन्छन्, जस्तै सप्ताहन्त, छुट्टीहरू र ग्रीष्मकालीन विश्रामहरूमा।
यदि तपाईंसँग अन्य उत्तेजकहरू वा एम्फैटामिन औषधिहरूमा एलर्जीको अनुभव भएको छ भने तपाईंले डेक्सेड्रिन वा एडडेराल लिनुहुन्न।
Dexedrine बनाम Adderall को बारे मा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
Dexedrine के हो?
डेक्सेड्रिन एक सीएनएस उत्तेजक हो जुन एडीएचडी र मादकोपचारको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ। यो DEA द्वारा एक अनुसूची II मादक पदार्थको रूपमा मानिन्छ यसको दुरुपयोग सम्भावनाको कारण र यो पर्चेमा मात्र उपलब्ध छ। डेक्सेड्रिन तत्काल रिलीज ट्याब्लेट र स्पानुलस, साथै विस्तारित-रिलीज क्याप्सूलमा विभिन्न शक्तिहरूमा उपलब्ध छ।
एडेरालल एक सीएनएस उत्तेजक हो जुन एडीएचडी र मादक पदार्थहरूको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ। यो पनि एक दुरुपयोग दोस्रो मानिन्छ डीईए द्वारा यसको दुर्व्यवहार सम्भावनाको कारणले र पर्ची द्वारा मात्र उपलब्ध छ। दुबै तत्काल रिलीज ट्याब्लेटहरू र विस्तारित-रिलीज क्याप्सूलमा विभिन्न सामर्थ्यमा उपलब्ध छ।
Dexedrine र Adderall उस्तै हो?
Dexedrine र Adderall समान औषधी हो तर वास्तवमा समान छैन। डेक्सेड्रिन डेक्स्ट्रोमफेटाइन सल्फेट मिलेर बनेको छ, जबकि एडडेराल डेक्स्ट्रोमफेटाइनलगायत मिश्रित एम्फेटामाइन साल्टबाट बनेको छ। दुबै ड्रग्स सीएनएस उत्तेजकहरू हुन् र समान साइड इफेक्टहरू र ड्रग अन्तरक्रिया प्रोफाइलहरू छन्।
Dexedrine वा Adderall राम्रो छ?
एडीएचडीको उपचारमा एम्फीटामाइन उपचारलाई प्लेसबोसँग तुलना गर्ने बहुविध अध्ययनहरूमा सामूहिक डेटाले देखाए कि एडडेरललाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ किनकि यसले एडीएचडी लक्षणहरूमा केही सुधार देखायो, जबकि डेक्सिड्रिनले गरेन। एम्फेटामाइन औषधिहरूले समग्र असर पार्दछन् जुन केही बिरामीहरूलाई लामो समयसम्म उपचार जारी राख्न गाह्रो हुन सक्छ।
के म गर्भवती हुँदा डेक्सेड्रिन वा एड्डेलरल प्रयोग गर्न सक्छु?
डेक्सेड्रिन र एड्डेलरल गर्भावस्था कोटि सी हो, यसको मतलब सुरक्षा स्थापना गर्न पर्याप्त, नियन्त्रित अध्ययनहरू छैनन्। यी औषधिहरू गर्भावस्थामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ जब लाभ स्पष्ट रूपमा जोखिमलाई पछाडि पार्छ।
के म Dexedrine प्रयोग गर्न सक्छु वा रक्सीको साथ Adderall?
मदिराको प्रयोगले डेक्सेड्रिन र एड्डेलरलको सीरम रगतको स increase्द्रता बढाउन सक्दछ, र त्यसकारण जब यी औषधिहरूमा रक्सीलाई वेवास्ता गर्नुपर्छ।
यो पागल कार्डियो/शक्ति कम्बो कसरत कोसिस गर्नुहोस्
के तपाइँ tramadol र hydrocodone सँगै लिन सक्नुहुन्छ
कसरी प्राकृतिक रूप मा कान को संक्रमण बाट छुटकारा पाउन
बीमा बिना डाक्टर भ्रमण को औसत लागत
वयस्क सुख्खा खोकी को लागी सबै भन्दा राम्रो कफ औषधि
के घरेलु उपचार द्वारा एक खमीर संक्रमण को लागी राम्रो छ